प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट नसार्न आग्रह - Everest Dainik - News from Nepal
हेटौँडा । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग आज बिहान भेटी हेटौँडाबाट अन्यत्र प्रदेश राजधानी नसार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
याे पनि पढ्नुस देउवा ज्यू ! ११ महिना भयो, अझै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएन नी ?
यसैबीच नेता देउवाले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५ सानोपोखरामा स्थानीयवासीको जनसहयोगमा निर्माण हुने शिव मन्दिरको आज शिलान्यास गर्नुभयो । विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय जनसहयोग गरी करीब रु ११ लाखको लागतमा मन्दिर बन्ने स्थानीय समाजसेवी माधव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । रासस